Maraykanka, 29 November 2019
Khamiis 29 November 2019
Soomaalidii ku geeriyootay Minneapolis oo la aasay
Magaalada Burnsville oo u dhow Minneapolis waxaa shalay lagu aasaay qaar ka mid ah dadkii Soomaalida ahaa ee ku dhintay dab saacadihii hore ee Arabacadii qabsaday guri ku yaalla xaafadda CEDAR RIVERSIDE ee magaalada Minneapolis oo ay guud ahaan ku dhinteen shan qof.
Mareykanka oo dib u billaabaya wada-hadallada Taliban
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo booaqsho aan la shaacin ugu tagay ciidamada Mareykanka ee jooga Afghanistan ayaa sheegay in maamulkiisa ay dib u billaabayaan wadahadallo nabadeed ee kooxda Taliban.
Minneapolis: Soomaali ku dhimatay dab ka kacay dhisme
Ugu yaraan 5 qof oo ay Soomaali ku jirto ayaa dhintay, iyadoo ilaa 4 qof oo kalena cisbitaalka la dhigay, ka dib markii mid ka mid ah daaraha ku yaalla xaafadda Cedar ee Soomalaidu ay ka dagan tahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota uu dab ka kacay Arbacadii shalay
Xohayihii Ciidanka Badda Mareykanka oo shaqada laga eryey
Wasiirka Gaashaandhigga Maraykanka Mark Esper ayaa shaqada ka eryey Xoghayaha Ciidanka Badda Richard Spencer, arrin la xiriirta askari ciidanka Navy-ga ka tirsanaa oo lagu eedeeyey inuu dambiyo dagaal ka geystay dalka Ciraaq.
Askar Mareykan ah oo ku geeriyootay Afghanistan
Militariga Mareykanka ayaa maanta sheegay in laba askari ay ku dhinteen diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah oo kusoo dhacday dalka Afghanistan.
Xubno kale oo ka markhaati furaya kiiska baaritaanka Trump
Roger Stone oo lagu helay dambiyadii lagu eedeeyey
Roger Stone oo saaxib iyo xulufo muddo fog la ah madaxweyne Donald Trump ayaa lagu dambiyadii lagu soo eedeeyey ee uu hortaagnaa maxkamadda federalka Mareykanka ee Washington DC.
Rudy Giuliani oo baaritaan lagu billaabay
Dacwad oogayaasha federaalka Mareykanka ayaa furay baaritaan lagu sameynayo Rudy Giuliani, oo ah qareen shakhsiga ee madaxweyne Donald Trump, waxaa sidaas werisay warbaahinta Bloomberg.
Aqalka Wakiilada Mareykanka ayaa maanta furay dhageysi si toos ah looga daawanayo taleefishinka oo ku saabsan in xilka laga xayuubiyo madaxweyne Trump iyo in kale.
Jimmy Carter oo qalliin lagu sameeyay
Madaxweynihi hore ee Mareykanka Jimmy Carter ayaa kasoo bogsanaya qalliin shalay lagu sameeyay, si looga fududeeyo cadaadis ka saarnaa dhanka maskaxda oo looga shakiyay inuu dhiig ku furmay, kaddib marki uu dhawaan dhulka ku dhacay.